Soo-gelooti; Fekrad iyo Falsafad – Cabdicasiis Guudcadde
May 20, 2015 December 20, 2015 Guudcadde
Soo-gelooti; Fekrad iyo Falsafad
Waxa la sheegaa in islaan soomaaliyeed oo miyiga xayn adhi ah ku raacaysa ay u yimaaddeen culimo Tabliiqiyiin ah, dabadeedna ay u sheegeen in ay u socdaan sidii ay u bari lahaayeen micnaha kelmadda tawxiidka ee “Laa illaaha illa laah”. Islaantii aqbalkay ugu duugtay, wayna ka oggolaatay in ay dhegaysato. Wadaadkii gadh’wadeenka ka ahaa kooxda ayaa bilaabay hadalkii, waxa uuna ku yidhi habartii “Micnaha eraygani waa ‘Illaah xaq lagu caabudo, illaahay mooyee, illaah kale ma jiro’”. Islaantii inta oo ay sidaa u eegtay ayay ku tidhi “Oo Hooyo ma anaa mid kaleba aqaannay, waa ii afkaagee”!
Dhacdadaasi waxa ay ina tusaysaa in Soomaalideennii hore, aqoontu ha ku yaraatee, ay ku naaloonayeen kalsooni soohdin’dhaaf ah oo ay ku qabeen diinta Eebbe iyo Eebbe laftarkiisa jiritaankiisaba. Diintu agtooda qiimaha u sarreeya ayay ku lahayd. Ma ay oggolaan jirin in diinta iyo cidda u adeegaysa, wadaadka, il xun lagu eego ama af xun lagu jeediyo. Aqoonta diimeed ee ay wadaaddadu lahaayeen waa iska koobnayd, haddana kalsoonida lagu qabay lagama sheekeeyaan ayay ahayd. Maahmaahyada soomaalida ayaaba laga dareemi karaa kaalinta sarraysa ee wadaadku u sarreeyay. Soomalidu waa ta tidhi: Saddex lagama kaco:
1. Wadar qodaxdeed
2. Waalid habaarkii, iyo
3. Wadaad jalleecadii.
Mar kale ayay tidhi, “Sooryo wadaad sebi laguma halleeyo”. Oo dadka waaweyn, ragga, ayaa wadaadka si meeqaam sarraysa u sooryayn jiray.
(Fadlan halkan ka sii akhri)
Previous Haweenka iyo Horumarka